Xiaomi na-egosi Mi Note 2 ọzọ na teaser na-akwado igwefoto abụọ | Akụkọ akụrụngwa
Anyị anọwo ogologo oge, m ga-ekwu na ọ dị oke ogologo, na-eche ngosipụta gọọmentị nke atụmanya ahụ Xiaomi Mi Nyocha 2Mana ọ dị ka onye nrụpụta nke China ka ọ ka ga-eche ihu na "kpoo" ikuku ma mepụta nnukwu mkpọtụ na ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ ya. Continuega n'ihu na ya atụmatụ ke akpatre hour a tọhapụrụ a ọhụrụ teaser na nke anyị nwere ike ịhụ ya imewe ọzọ.
Nakwa na nke a teaser na ị nwere ike ịhụ n'isi isiokwu a, igwefoto abụọ dị n'azụ nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ na nke a na Nkọwapụta 2 a gosipụtara. N'ezie, maka oge a, anyị enweghị ụbọchị akọwapụtara maka ngosi ọhụrụ nke Xiaomi ọhụrụ.
Yesnyaahụ ọtụtụ ihe oyiyi nke ọhụrụ Xiaomi Mi Note 2 na-agbapụta, taa anyị tetere na onyinyo a nke njedebe, na ihe ịrịba ama na onye nrụpụta China chọrọ nkwenye ụfọdụ akụkụ nke ekwentị ọhụrụ ya. Iji leaked oyiyi, Xiaomi zara na ukara oyiyi. Ikekwe ihe na-esote bụ iji gosipụta atụmatụ na nkọwapụta nke anyị maraworị n'ụdị asịrị ruo nwa oge.
Akụkụ: 155 x 77 x 6.5 mm
Ngosipụta: 5.7-inch AMOLED Quad HD na mkpebi nke 2.560 x 1.440 pikselụ
Ncheta RAM: 4 ma ọ bụ 6 GB
Nchekwa dị n'ime: nsụgharị dị iche iche n'etiti 32 na 256 GB
16 megapixel sọrọ n'azụ igwefoto.
Sistemụ nrụọrụ: Android Nougat 7.0 na oyi akwa nhazi MIUI 8
Laghachi na teaser nke Xiaomi Rịba ama 2 anyị nwere ike ịhụ nlezianya atụmatụ nke ngwaọrụ yana yana anyị ekwuola igwefoto abụọ na ihe atụ anyị ahụlarị na iPhone 7 Plus. Ugbu a, anyị ga-anwale igwefoto wee hụ ma ọ dị ndụ ruo ihe anyị niile tụrụ anya ya na ọtụtụ tụọ.
Kedu ihe ị chere gbasara Xiaomi 2 dị na ihe anyị nwere ike ịhụ na teaser ọhụrụ nke Xiaomi bipụtara na awa ndị ikpeazụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Xiaomi na-egosi Mi Note 2 ọzọ na teaser na-akwado igwefoto abụọ
Apple na-aga n'ihu na-enweghị ike izute nnukwu ọchịchọ dị ugbu a maka iPhone 7